मेस्सीको करिअरमा अझै कति गोलको किर्तिमानी कोशेढुँगा बाकी छन् त ? – Talking Sports
एकै क्लबका लागि सबैभन्दा बढी गोल गर्ने किर्तिमानमा ब्राजिलियन लेजेण्ड पेलेको बराबरी गरेका लियोनल मेस्सीले शनिबार बार्सिलोनाका लागि ६ सय ४३ औं गोल गरे ।
तर फुटबलका सर्वाधिक महान गोलकर्ता को हुन् ?
भ्यालेन्सियाबिरुद्ध २–२ गोलको बराबरी खेल्दा पहिलो हाफमा पेनाल्टीमा चुकेपछि मेस्सीले दोश्रो हाफको शुरुवातमा नै जोर्डी आल्बाको क्रसमा बार्साको लागि किर्तिमानी गोल गरे । १९७४ मा न्युयोर्क कसमस जानुअघि पेलेले सान्तोसका लागि उक्त किर्तिमान कायम गरेका थिए ।
बार्सिलोनाका लागि ७४८ खेल खेलेका मेस्सीले १ दशमलव १६ को औषतमा गोलहरु गरेका छन् । पेलेले १ दशमलव १७ को औषतले ७ सय ५७ खेलमा आफ्ना गोलहरु गरेका हुन् । “मेस्सीको तथ्यांक हेर्ने हो भने निकै प्रभावशाली छ । मलाई लाग्दैन बार्साका लागि यसरी असर पार्न सक्ने खेलाडी फेरि हुनेछन् । यही कारणले मेस्सी नम्बर वान खेलाडी हुन् । उनले क्लबको लागि जे गरे निकै प्रभावशाली छ,” बार्सा प्रशिक्षक रोनाल्ड कोमनले भने ।
मेस्सीले फुटबल इतिहासको पाना अपडेट नगरेको बिरलै कुनै एउटा सिजन होला । जुलाई १ मा एट्लेटिको म्याड्रिडबिरुद्ध खेल्दा उनले निकै चातुर्यता पुर्वक प्रहार गरिएको पनेंका पेनाल्टीमार्फत उनले व्यवसायिक करिअरको ७ सयौं गोल गरेका थिए ।
बार्सिलोनाका लागि मेस्सीले पहिलो गोल गरेयता १५ बर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । मे १, २००५ को स्पेनिस ला लिगामा उनले अल्बासेटेबिरुद्धको २–० को जितमा उनले पहिलो पटक बार्सिलोनाका लागि गोल गरेका थिए ।
तर यही अगष्टमा उनले क्लब छोड्ने धम्की दिदा उनको क्याटलोनियासँगको लभ अफेयर अमिलो बन्दै गएको थियो । हालको सम्झौता समाप्त हुने हुदा मेस्सी जुलाई १, २०२१ मा फ्रि एजेन्टको रुपमा बार्सिलोना छोड्न सक्नेछन् ।
अनौपचारिक खेलहरुमा गरिएका गोललाई पनि गनिने हो भने मेस्सीले बार्साका लागि ८ सय १ खेलमा ६ सय ८० गोल गरेका छन् । ६ पटकका बालोन डि ओर अवार्ड बिजेता मेस्सी स्पष्ट रुपमा बार्सिलोनाका सर्वाधिक गोलकर्ता हुन् । २ सय ३० गोलका साथ दोश्रो स्थानमा रहेका सेजार रोद्रिगेजसँग निकै फराकिलो अन्तरले अघि रहेका मेस्सी स्पेनिस च्याम्पियनसिपमा पनि सर्वाधिक गोलकर्ता हुन् ।
उनका पुराना प्रतिद्वन्दी त्रिष्चियानो रोनाल्डोको ३ सय ११ गोलको तुलनामा मेस्सीको नाममा ४ सय ५० गोल रहेको छ । मेस्सीले बार्साका लागि पनि सबैभन्दा बढी उपाधि जित्ने किर्तिमानमा नाम लेखाएका छन् । उनले जितेका ३४ उपाधिमध्ये चार च्याम्पियन्स लिग रहेको छ ।
ब्राजिलियन लेजेण्ड पेलेको रेकर्डको बराबरी गर्दा तीन हप्ता अघि मात्र आफ्ना पुर्व प्रशिक्षक र अर्जेन्टिनी आइकन डिएगो म्याराडोनालाई गुमाएको मेस्सीको लागि पछिल्लो उपलब्धिले बिशेष महत्व राखेको छ ।
“फुटबलमा केही राजकुमारहरु हुन्छन् तर किँग एक मात्र हुन्छ,” बर्तमान बिश्व फुटबलको सुपरस्टार खेलाडी को भन्ने बिषयमा पेलेले यसै बर्ष नाम नलिएर भनेका थिए । ८० बर्षिय पेलेले शनिबार मेस्सीलाई बधाई पनि दिएका थिए ।
“एउटै क्लबलाई यति लामो समय माया गरिरहने कथा दुर्भाग्यपूर्णरुपमा फुटबलमा निकै दुर्लभ हुने गर्छ । म तिम्रो निकै सराहन गर्छु, लियो मेस्सी,” पेलेले भने ।
तर पेलेको नाममा अझै पनि केही किर्तिमानहरु रहेका छन् ।
आफ्नो पुरै करिअरमा आधिकारिक खेलहरुमा ७ सय ५७ देखि ७ सय ६७ गोलसम्म गरेका पेले अझै पनि सबैभन्दा बढी गोल गर्ने खेलाडीहरुको सुचीमा क्रिष्चियानो रोनाल्डो (७ सय ५६) र मेस्सी (७ सय १४) भन्दा धेरै अगाडी छन् । औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा खेलिएका खेलहरुबाट पेलेले एक हजार भन्दा बढी गोल गरेका छन् ।
तर आधिकारिक खेलहरुलाई मात्र गणना गरिने हो भने पेले आफै पनि पुर्व अष्ट्रियन र चेकोस्लोभाकियाका स्ट्राइकर जोसेफ बिकनभन्दा पछाडी रहेका छन् । आफ्नो तीन दशकको सकृय फुटबल करिअरमा बिकनले ८ सय ५ गोल गरेका थिए ।